Madaxwaynaha PL iyo Ra'iisul Wasaaraha oo saxafada la hadlay (Sawiro)
October 10, 2014 (GO)- Ra'iisul Wasaaraha Somalia Cabdiwali Shiikh Axmed oo isaga iyo wafdi uu hogaaminayaa maanta duhurkii soo gaareen magaalada Garowe ee xarunta dowladda Puntland ayaa ka mahad celiyay soo dhowaynta diiraan ee shacabku u sameeyeen kadib markii ay saxafadda isaga iyo Madaxwayne Gaas madaxtooyada si wadajir ah ugula hadleen.
Madaxweynaha Puntland Cabdiwali Cali Gaas ayaa sheegay inaysan ahayn markii ugu horaysay uu Ra'iisul Wasaare Cabdiwali Shiikh Garowe yimaado hase ahaatee ay ka wada hadli doonaan arrimo badan oo u dhaxeeya Puntland iyo Federaalka.
Inkastoo Gaas uusan saxafadda faah faahin badan ka siin inay ka wada hadli doonaan khilaafka u dhaxeeya iyo sida lagu xalin karo ayaa wararka aanu ka helayno madaxtooyadda waxay sheegayaan labadaan masuul inay si hoos uga wada hadli doonaan dhamaynta khilaafka soo laalaabtay ee labada dhinac u dhaxeeya.
Wasiirka koowaad ee Dowlada Federaalku wuxuu intaas ku daray in socdaalka uu Garowe kusoo gaaray yahay mid shaqo isagoo rajo weyn ka muujiyey in wadahadalada uu la yeelan doono madaxda Puntland inay noqdaan kuwo wax ku ool ah natiijo fiicanna ay kasoo bixi doonto.
Khilaaf xoogan ayaa u dhaxeeya Puntland iyo dowladda Federaalka kasoo ka dhashay markii hore wax ka badal lagu sameeyay dastuurka KMG ah ee dalka, dhaqaalaha magaca Soomaaliya lagu soo qaado oo aan soo dhaafin Muqdisho, inkastoo xukumaddani Gaas ay xiriirka u jirtay kolkii Muqdisho lagu saxiixay heshiiska dhismaha mamulka gobalada dhexe ee dalka.
Warar lagu kalsoon yahay oo xafiiska RW. Somalia ka helnay ayaa sheegaya Cabdiwali Shiikh inuu maalmo ku sugnaan doono magalada Garowe madaxda Puntland-na ay isla falanqayn doonaan khilaafka iyo sida xal lagu gaari doono.
Xarunta madaxtooyada waxaa caawa ka dhici doonta xaflad ballaaran oo lagu casumay dad labo boqol kor u dhaafaya isguna jira mas'uuliyiin dowladda ka tirsan iyo xubno metelaya qaybaha kala duwan ee bulshada, xafladaas oo lagu soo dhoweynayo wafdiga Ra'iisul Wasaaraha.